रातभर मोबाइल चार्जमा राख्नुहुन्छ ? यस्तो खतरा हुनसक्छ - Jagaran Post
रातभर मोबाइल चार्जमा राख्नुहुन्छ ? यस्तो खतरा हुनसक्छ
जागरणपोस्ट १६ फाल्गुन २०७७, आईतवार १६:२८
एजेन्सी : के तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनलाई रातभर चार्जमा लगाएर छोड्नुहुन्छ ? के यसो गर्दा ब्याट्री खराब त हुँदैन ? वा ब्याट्रीको आयू त छोटिँदैन ? यस विषयमा यस्तै कयौँ जिज्ञासा र भ्रमहरू विद्यमान छन् । उसो भए वास्तविकता के हो त ? आज हामी त्यस विषयमा चर्चा गर्ने छौँ ।
स्मार्टफोनहरूमा लिथियम–आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको हुन्छ । तपाईं हामीमध्ये कतिपयले स्मार्टफोनलाई राती सुन्नेबेला चार्जमै छोडिदिन्छौँ । यसरी रातभर फोन चार्जमै छोड्नु बिल्कुल गलत तरिका भने होइन । किनभने तपाईंको फोन शतप्रतिशत चार्ज हुने वितिक्कै स्वतः चार्जिङ बन्द हुन्छ ।
स्मार्टफोनमा कतिखेर फुल चार्ज हुन्छ र आइरहेको करेन्टलाई रोक्ने भनेर थाहा पाउने प्रविधि राखिएको हुन्छ । त्यसैले ब्याट्री ओभर चार्ज हुने सम्भावना नै रहँदैन । ब्याट्रीको चार्ज सकिँदै गएपछि तल्लो सीमामा पुग्ने वितिक्कै स्वतः मोबाइल बन्द हुने भएकाले ओभर डिस्चार्ज समेत हुँदैन ।
यद्यपि रातभर चार्जमा राख्दा फुल चार्ज हुने वितिक्कै चार्जिङ बन्द हुने भएतापनि लगत्तै डिस्चार्ज सुरु हुन्छ । मोबाइल फोन निर्माता कम्पनीहरूले सेट गरेको थ्रेसहोल्डका आधारमा पुनः चार्ज हुन थाल्छ । यदि रातभर मोबाइल चार्जमा छाड्दै हुनुहुन्छ भने चार्जमा राख्नुअघि स्वीच अफ गर्नुहोस् ता कि ब्याट्रीमा अनावश्यक भार नपरोस् ।
तर मोबाइल रातभर चार्जमा राख्दा ओभर फुल भएर पड्किन्छ अथवा ब्याट्री बिग्रिन्छ भन्ने सोचाइ छ भने त्यो एउटा मित्थ्या नै हो । हिजोआजका फोनमा प्रयोग हुने ब्याट्री भनेको लिथियम आयम ब्याट्रीका कारणमात्रै होइन, यसमा प्रयोग हुने प्रोसेसर पनि पहिलेको तुलनामा धेरै नै पावरफुल भएका छन् ।
मोबाइलमा प्रयोग हुने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिले एक पटक मोबाइल चार्ज फुल भएसँगै आफै चार्जलाई डिस्कनेक्ट गर्छ । यसको अर्थ रातभर मोबाइल चार्जमा राख्दा कुनै असर भने पर्दैन । तर, यो भन्दैमा आफू सुत्ने सिरानीसँग मोबाइल चार्जमा राख्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन किनभने यदि मोबाइलमै कुनै समस्या आएर सर्टसर्किट हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयलाई भने ध्यानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अर्काेतिर ब्याट्री लामो समयसम्म टिकाउने उपाय चैं जानिराखेको राम्रो हुन्छ । स्मार्टफोनको ब्याट्रीलाई मजबुत र टिकाउ राख्ने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भनेकै २० प्रतिशत ब्याट्री बाँकी छँदा मात्रै चार्जमा जोड्ने गर्नुहो्स् र ८० प्रतिशत पुग्ने बितिक्कै चार्जरबाट छुटाउनुहोस् ।
छिनछिनमा चार्जमा जोड्ने र छुटाउने गर्दा ब्याट्रीको आयूमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । अनि अर्को महत्वपुर्ण विषय चार्जमा छँदा फोन प्रयोग गर्नु गलत तरिका हो, किनकि त्यसले फोनको तापक्रम बढाउन सक्छ । यदि फोनको ब्याट्री तातो भइरहेको अवस्थामा निरन्तर चार्ज गर्दै फोन चलाउने गर्नुहुन्छ भने त्यो हानिकारक हुन सक्छ ।
ब्याट्री ओभर हिट भयो भने जे पनि हुन सक्छ । अर्काेतिर लगातार उच्च तापक्रममा चलाउनले ब्याट्री पनि सुख्खा हुन्छ, जसले गर्दा तपाईंको मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफ घट्नेछ ।
‘फाइभजी’ सेवा चाँडै नै परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको
अब मोबाइलबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिन्छ
साढे दुई करोड जनसङ्ख्याको पहुँचमा इन्टरनेट
नेपाली आकाशमा अब इन्टरनेटको सुविधा
वायु प्रदूषणले रोकियो अन्तर्राष्ट्रिय उडान
दीपाश्रीको फेसबुक एकाउन्ट ह्याक, ह्याकरले बैंक खाता पठाएर
कपिलवस्तुमा लुम्बिनी फोटोग्राफर संघको क्षेत्रगत समिति गठन
२०२० मा विश्वभरमा सर्वाधिक डाउनलोड भयो टिकटक